Tartanka Koobka Kubada Cagta Ee Horyaalnimada Deegaanada Dalka Ayaa Si Xamaasad leh Uga Socda Xarunta DDSI-jigjiga - Cakaara News
Tartanka Koobka Kubada Cagta Ee Horyaalnimada Deegaanada Dalka Ayaa Si Xamaasad leh Uga Socda Xarunta DDSI-jigjiga
jigjiga(CN), Arbaco, 12ka August.Tartankan koobka kubada cagta ee horyaalnimada deegaanada dalkeenan itoobiya oo ay kuloolamayaan 35 kooxood ayaa si xamaasad leh uga socda magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka. Iyadoo deegaan walba ay uga qayb galayso 4 kooxood oo xul ah. Waxayna cayaarahani labada galinba kasocdaan 3 garoon oo waa wayn oo kala ah: xarunta madaxtooyada, kuliyada macalimiinta ee Dr. cabdi majiid xuseen iyo jaamacada jigjiga.
Iyadoo hanaanka la isugu xidhay kooxaha deegaanadu ahaa 6 meelood oo waawayn oo ay meeshiiba tahay 6 kooxood marka laga reebo koox kadhiman mid kamid ah deegaanada ayaa wakhtiga, goobta iyo nidaamka la isugu aadiyeyna ay tahay mida shaxdan hoose kucad:
Jigjiga vs janeel
Korim katama vs Qirqos
Ambo vs Walayta
Harar shankor vs Asosa katama
Harar buna vs Tana baherdar
KSSA vs Birhan
Galan katama vs Durame katama
Abay shirkole vs Gulale
Bure katama vs Karamara
Rayi vs yunit
Habkon vs Harar maramiya
Ali habte vs Garage ganda wuha
Liyu police vs Afarniqalo
Lalibela vs Farawn
Benishangul police vs Waliya
Wuqro vs Fafan
Tulobalo vs Dabarqo
Dhanka kale, waxaa iyana Furitaankii tartankan kasoo qaybgalay mas’uuliyiin sare oo heer federal iyo heer deegaan isugu jirta oo sheegtay inuu tartankani yahay mid sii xoojinaya wanaaga iyo is-dhexgalka wadanoolaanshiiyo ee qoomiyadaha iyo shucuubaha dalka. Iyadoo shacab-weynaha jigjiga uu halkaa kamuujyey soo dhawayn farxad leh oo ay mudo dherarayeen.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa cayaartii koobaad ee tartan lagu furay labada kooxood eek ala ah: D.H Ee jigjiga iyo Jan’el. Halkaas oo ay labada kooxood ku dhexmartay cayaar runtii gil-gilshay garoonka. Ugu danbaynse, waxay guushu raacday kooxda Janel oo (1-0) kaga adkaatay jigjiga.
Islamaalintaas, waxaa iyana isu baxay Korim katama iyo Qirqoos waxayna baxeen kalama adkaan(1-1)
Hasayeeshee, waxaa jawiga badalay oo qaylo iyo sawaxan garoonku hal mar ladhawaaqay cayaartii Ambo katama iyo Walayta soda ay iskaga horyimaadeen garoonka jaamacada jigjiga. Nasiib-darase, waxay cayaartaasi kusoo af-meerantay bar-baro(0-0). Harar shankor iyo Asosa katama ayaa iyaguna lamid ah(0-0). Balse, Tana baherdar ayaa iyadu bacda iskajartay oo (1-0) ugu xoog-sheegatay Harar buna. Galan katamaana waxay afka ciida udartay Durame katama oo ay kaga guulaysatay(1-0).
Ugudanbayntii, waxaa wali lagu gudajiraa wareegii 1, aad ee tartankan inkastoo lafilayo inuu soo gabagaboobi doono maalmahan fooda inagu soo haya balse wali fari kama qodna oo ilaa 90 kulan bay kakooban yihiin cayaarahani.